Wasiir Puntland oo burcad haysato - BBC News Somali
Wasiir Puntland oo burcad haysato
Image caption Wasiirka dekadaha iyo gaadiidka badda ee Puntland Saciid Maxamed Raage
Wasiirkii dekedaha ee Puntland ayaa weli ku sugan degmada Jirriiban ee gobolka Mudug halkaas oo la sheegayo in hayo ka dib markii shalay gelinkii dambe ay xoog ku kaxaysteen koox burcad-badeed ah oo ka hawlgasha degaanka Garacad.
Sida ay sheegayaan wararkii ugu dambeeyay ee laga helo Jirriiban Saciid Maxamed Raage wasiirka dekedaha waxaa lagu hayaa hotel halkaas ku yaalla waxaana socota waan-waan ku saabsan sidii wasiirku dib ugu heli lahaa xorriyadiisa taas oo ay wadaan odayaasha degaankaas.
Burcad-badeedka wasiirka afduubtay ayaa iyana la sheegayaa inay halkaas joogaan.
Waxaa dadka qaarkiis ay sheegayaan inay suuragal tahay wada xaajood halkaas ka billowda maanta, iyadoo dhinaca kalana uu maanta magaalada Jirriiban u ambabaxay wafdi ballaaran oo ka tegay magaalada Galkacyo kaas oo uu hoggaaminayo guddoomiyaha gobolka Mudug Axmed Cali Salaad.
Afduubka wasiirka ayaa ka dambeeyay iska hor-imaad ay dad ku dhinteen oo shalay ka dhacay magaalada Garacad kaas oo dhexmaray ciidamo la socday wasiirka iyo koox burcad-badeed ah.
Kooxaha burcad-badeedka ayaa xoog ku leh degmada Garacad iyo dhulka u dhow halkaas oo ay isku urursadeen ka dib markii maamulku ka sifeeyay degaanno kale oo ay horay ugu sugnaayeen.